Thailand International Flights: On Hold Until September? | Airline News
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Sidina iraisampirenena Thailandy: mijanona hatramin'ny volana septambra?
Seranam-piaramanidina Suvarnabhumi any Bangkok sy sidina iraisam-pirenena any Thailandy - sary © AJ Wood
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sidina iraisampirenena Thailandy: mijanona hatramin'ny volana septambra?
Ny talen'ny sidina fiaramanidina sivily dia nilaza fa ny sidina iraisam-pirenena Thailand dia mety tsy hiverina any Thailand raha tsy amin'ny faran'ny volana septambra.
Fahefana avaratry ny sidina sivily ao Thailand talen'ny Chula Sukmanop dia notaterina tao amin'ny gazety anglisy anglisy Khaosod fa tsy nisy na iray aza ny seranam-piaramanidina nihaona taminy naneho ny fahalianany hamerina ny sidina iraisam-pirenenan'izy ireo amin'ny volana ho avy, raha toa ka tapitra ny fotoana ny didy hanidiana ny habakabak'ilay firenena. Nolazainy fa ny fisalasalana amin'ny tsy fahazoana antoka amin'ny politikan'ny governemanta momba ny dia iraisam-pirenena.
"Mino aho fa hiverina indray ny sidina iraisam-pirenena amin'ity volana septambra ity," hoy i Chula. “Ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka rehetra dia tsy afaka nanombana ny tinady fitaterana an'habakabaka. Tsy maintsy miandry izy ireo ary hahita ny raharaha amin'ny faran'ity volana ity.
Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra farany ny governemanta alohan'ny hisokafan'ny habakabaky ny firenena, fa tsy midika fisokafana tanteraka ho an'ireo mpandeha an'habakabaka izany, satria ny mpandraharaha ihany no avela handray ny sidina araka ny tolo-kevitry ny bubble fitsangatsanganana. », Hoy ihany izy.
Ny seranam-piaramanidina Thailand (AoT) dia maminavina ny fitomboana tanteraka amin'ny sidina 493,800 sy mpandeha manodidina ny 66.58 tapitrisa eo anelanelan'ny Oktobra 2019 sy septambra 2020. Ny fiheverana dia miorina amin'ny famerenan'ny sidina an-trano voafetra amin'ny Mey ary avy eo ny fihenan'ny fandaharam-potoanan'ny sidina.
Tamin'ny webinar iray vao haingana tao amin'ny Amcham no nikarakara ny faneva “Fizahan-tany Thailand Forum 2020 - Temperature Check ”tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, ny CEO Charles Blocker CEO IC Partners Ltd dia nitatitra fa 22 amin'ny 38 ny seranam-piaramanidina Thai no nisokatra (58%) saingy 50% fotsiny ny fahaizan'ny sidina '25' ary 30-XNUMX% ny seza no nipetraka.
Webinar: Airlift an-trano
Na dia niverina aza ny sidina (ao an-trano ihany) dia mieritreritra ny AoT fa hiverina amin'ny habeny mahazatra, na izany aza, dia haharitra kokoa. Ny fijerena ny vinavina maharitra ho an'ny fanarenana dia nanambara ny sidina AoT fa tsy hiverina amin'ny "ara-dalàna" alohan'ny Oktobra 2021.
Ny filohan'ny seranam-piaramanidina Thailandey, Nitinai Sirismatthakarn, dia nitatitra fa ny sidina an-habakabaka dia tokony hiverina amin'ny ambaratonga alohan'ny Covid19 amin'ny Oktobra 2021, 18 volana miala. Fa mandritra ny sisa amin'ity taona ity, ny sehatry ny seranam-piaramanidina Thai dia manantena ny fihenan'ny sidina sy ny laharan'ny mpandeha.
“Ny fanarenana ireo làlana iraisam-pirenena [Thailand] dia hiankina amin'ny fomba haingana hanomezana vaksinina na fanafody antivirus.
"Ny sidina sy mpandeha tanteraka dia hidina 44.9% ary 53.1% isan-karazany, noho ny areti-mandringana Covid-19," hoy izy tamin'ny Nation Thailand.
"Ireo firenena manan-danja mankany Thailand dia ireo firenena ao amin'ny faritra Azia-Pasifika izay mahatratra 80% ny dianay."
Ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta dia milaza fa ny fifehezana ny virus Covid-19 dia miankina amin'ny fepetra samihafa raisin'ny firenena samihafa, ny sasany henjana kokoa noho ny sasany.
Voalaza mialoha fa ho tafarina aloha ny sehatry ny sidina anatiny, satria ny fanarenana ireo làlana iraisam-pirenena dia miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny vaksinina na fanafody antivirus.
Ny habakabaka any Thailand dia nakatona tamin'ny sidina iraisam-pirenena nanomboka ny volana aprily noho ny areti-mifindra coronavirus. Ny dia tena ilaina toy ny famerenana an-tanindrazana sy ny sidina diplomatika ihany no navela hisidina ho any amin'ny firenena, na dia ny ankamaroan'ny sidina an-trano aza dia niverina taorian'ny herinandro vitsivitsy nihena ny aretina tany amin'ny firenena ary tsy nisy areti-mifindra vaovao notaterina nandritra ny 24 andro. I Thailand dia tsy nanana afa-tsy tatitra 3,146 momba tranga COVID-19 ary 58 fotsiny no maty raha ampitahaina amin'ny tranga 8.58 m amin'ny tany manontolo ary 456,384 no maty.
Nanambara ihany koa ny masoivohon'ny seranam-piaramanidina andiana fepetra vaovao momba ny fiarovana mandritra ny fihaonana amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny seranam-piaramanidina ny talata teo.
Araka ny lalàna vaovao, tsy mila mamela toerana tsy misy eo anelanelan'ny mpandeha intsony ny mpitatitra fiaramanidina, fa ny mpandeha kosa dia mila mitafy saron-tarehy mandritra ny dia.
Ny sakafo sy ny zava-pisotro dia mety hatolotra amin'ny sidina mihoatra ny adiny roa fotsiny ary tsy maintsy omanina ao anaty kaontenera mihidy izy ireo. Takiana ihany koa ny seranam-piaramanidina hanomanana toerana ao an-kabine mba hampisarahana ireo mpandeha marary amin'ny hafa.
Ny sidina eto an-toerana dia navela handoa vola indroa heny noho ny vidiny tany am-boalohany satria nila namela seza maro foana izy ireo hiantohana ny halaviran'ny fiaraha-monina. Nanantena ny sefon'ny fiaramanidina sivily fa ho ambany ny saran-dalana, noho ireo fepetra farany nanalefaka ny famerana ny fivezivezena.
Webinar: Dingana sy torolàlana amin'ny fahatongavan'ny vahiny
Andriamatoa Blocker, CEO an'ny IC Partners dia nanoro hevitra fa azo inoana fa ny fepetra henjana amin'ny fahatongavan'ireo vahiny dia mety hampihena ny fandrosoana, ary ny quarantine 14 andro dia mety hafoin'ny governemanta.